ओली र माधव नेपाल मिलेर देउवा र प्रचण्डलाई रिँगाए ! ओली र माधव नेपाल मिलेर देउवा र प्रचण्डलाई रिँगाए ! Canada Nepal
Oct 21 2021 | २०७८, कार्तिक ४गते
२०७८, कार्तिक ४गते
भारतको सहज जीत, अस्ट्रेलिया ९ विकेटले पराजित
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रवाह हुँदै १० अर्बको रिपो जारी गर्दै राष्ट्र बैंक
प्रधानसेनापति शर्मा र राजदूत भोल्कबीचको भेटवार्तामा के भयो ?
सैफ अलि खानपुत्री साराको बलिउडमा ‘डेब्यु’ गर्दाको यस्तो छ कथा
प्रतिनिधिसभाको अवरोध खुलाउन पहल भइरहेको छ - सभामुख सापकोटा
शाहरुख खानका छोरा आर्यनको जमानत खारेज
तीन दिनदेखिको निरन्तर वर्षाका कारण ताप्लेजुङ अन्धकारमा
अपडेट : बाढीपहिरोमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या ७७ पुग्यो, २७ अझै बेपत्ता
ओली र माधव नेपाल मिलेर देउवा र प्रचण्डलाई रिँगाए !
क्यानाडा नेपाल श्रावण २५ २०७८
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अझै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । विभिन्न कारण मध्ये मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुनुलाई एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहलाई पर्खनु पनि एक रहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ । किन त नेपाल समूहले महिना दिनसम्म ठोस निर्णय गर्न सकेन र सत्तारुढ गठबन्धनलाई अल्मल्यायो ?
लामो राजनीतिक र संवैधानिक संघर्षपछि गठबन्धनका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेको नेपाल समूहका नेता माधवकुमार नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई मुलुकको कार्यकारी पद प्रधानमन्त्रीमा बसाल्न सफल भए । आफ्नै प्रयास र संघर्षपछि गठन भएको सरकारलाई नेपाल समूहले किन रिँगाइरह्यो त ? यो अहिले राजनीतिक वृत्तमा उठेको टड्कारो प्रश्न हो ।
यसको जवाफ न त प्रधानमन्त्री देउवाले खोजेका छन् न त सत्तारुढ गठबन्धनका नेता प्रचण्डले नै । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएको विषयले प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डमात्रै होइन नेता नेपाल पनि आलोचित छन् । तर, पनि सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा उनीहरुले तदारुकता देखाउन सकेका छैनन् । कतै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको साँठगाँठमा नेता नेपालले देउवा र प्रचण्डलाई असफल बनाउने रणनीति त लिएका होइनन् ?
सुरुमा जनता समाजवादीको आधिकारिकता विवादलाई देखाएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिइएन । जसपाको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगले टुंग्याएको पनि सोमबार १५ दिन भइसकेको छ । तर, नेपाल समूहलाई पर्खने बाहनामा देउवा सरकारलाई नै असफल बनाएर आउँदो निर्वाचनमा एमालेले आफ्नो साख उच्च बनाउन नेता नेपाल प्रयोग भएका त होइनन् ? अहिले कांग्रेसभित्र गाइँगुइँ आशंका चल्न थालेको छ ।
गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न रोकेर नेता नेपालले के दाउ छोपिरहेका छन् ? केही कांग्रेस नेताहरुले आफैँआफैँमा प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
माधवकुमार नेपालका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको प्राध्यापक डा. विष्णु दाहाल बताउँछन् । नेपाल समूहलाई सरकारमा लैजान मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको उनको बुझाइ छ । तर, नेता नेपाल स्वयं सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा अहिलेसम्म बोलेका छैनन् । नेपाल समूहका अरु नेताहरु सरकारमा जानुपर्ने र नपर्ने दुवैथरी अभिव्यक्ति दिइरहँदा नेता नेपाल भने मौनता साँधेर बसेका छन् ।
जब जब सरकार र गठबन्धनले गति लिन खोज्छ, तब तब एमालेको एकता प्रयास घनिभूत हुने गरेको नेताहरुले बताउन थालेका छन् । सरकारमा जाने हो भने तत्काल निर्णय गरेर जानु पर्ने, नजाने हो भने नजाने औपचारिक धारण दिनुपर्ने माधवकुमार नेपालले त्यसो नगरी सरकारलाई अल्मल्याएर राखेका छन् ।
पार्टी एकताको प्रयास भइरहेकाले अहिले निर्णय नगरिहाल्ने बताएर मुलुक सञ्चालनमा व्यवधान खडा गरेर नेता नेपाल कतै ओलीसँगको मिलोमतोमा त कदम चालिरहेका छैनन् ? यस्ता प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा उठ्न थालेको छ ।
ओली र माधवकुमार मिलेर प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डलाई झुलाएर एमालेको राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने काम त भइरहेको होइन भन्ने आशंकालाई न त नेता नेपालले नै खण्डन गर्न सकेका छन्, न त गठबन्धनमै यसबारे कुरा उठेको छ । जे होस् मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा गठबन्धनभित्रैकै समस्या र नेपाल समूहलाई पर्खने बाहनाले व्यवधान भइरहेको छ ।
श्रावण २५, २०७८ सोमवार ११:१५:०७ बजे : प्रकाशित
# माधव नेपाल
# पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
एमालेले बोलायो स्थायी कमिटी बैठक, यस्ता छन् एजेण्डा
काठमाडौं - नेकपा एमालेले पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ । बैठकबिहीबार अपरान्ह ४ बजे तुल्सीलाल प्रतिष्ठान च्यासलमा बस्ने पार्टी कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए । तामाङले मुख्यतः पाँचवटा एजेण्डामा छलफलको लागि बैठक बोलाइएको बताए ।
बैठकमा विधान महाधिवेशन समीक्षा, ६ कात्तिकमा हुने भनिएको वडा अधिवेशन, ९ कात्तिकमा हुने भनिएको पालिका अधिवेशन, राष्ट्रिय महाधिवेशन र हालै भएको अविरल वर्षका कारण भएको जनधनको क्षति सम्बन्धमा छलफल हुने उनले बताए ।
कार्तिक ३, २०७८ बुधवार १४:४४:२९ बजे : प्रकाशित
बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई दुई लाख दिने सरकारको निर्णय
काठमाडौं - सरकारले बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई राहत दिने भएको छ । बुधबार बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीपहिरोमा एकजना गुमाएका परिवारलाई दुई लाख, दुईजना वा त्यसभन्दा बढी गुमाएका परिवारलाई थप एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
उक्त बैठकले हालैका दिनमा प्राकृतिक प्रकोपबाट भएको मानवीय क्षतिको विश्लेषण गर्दै राहत दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले बाढीपहिरोले जमिन गुमाएकालाई जमिन उपलब्ध गराउने र घर पूर्णरूपमा क्षति भएकालाई हिमाली क्षेत्रमा पाँच लाख, पहाडमा चार लाख र तराईमा तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
कार्तिक ३, २०७८ बुधवार १७:५६:३४ बजे : प्रकाशित
ओलीले भने - 'सरकार ढाल्दिऊँ भन्ने हो भने एक हप्ताभित्र सरकार जान्छ'
काठमाडौं - नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले कुनैपनि काम गर्न नसक्ने दावी गरेका छन् । बुधबार पार्टीको वागमती प्रदेशको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सो कुरा बताएका हुन् ।
देश बनाउने निश्चित भएपछि मात्रै आफ्नो पार्टी सरकारमा जाने बताउदै उनले देश बनाउने कुरा र सरकार बनाउने कुरा फरक भएको बताए । उनले देश बनाउन आउँदो निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउनुपर्ने पनि बताए ।
उनले एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेका कामले गिनिज बुकको आधा भाग भरिने पनि बताए । अहिलेको सरकारले केही काम गर्न नसक्ने बताउदै ओलीले आफ्नो पार्टी बाहेक अर्को पार्टीले विकास गर्न नसक्ने बताए ।
उनले भने - 'गिनिज बुकको आधा भाग त हामीले गरेको कामले भरिन्छ । दुई यो एमाले हो क्या एमाले । गिनिज बुकमा लेख्ने कुरा कति छन्' कति उनले थपे - 'दुईपटक किड्नी फेरेर पनि प्रधानमन्त्री बन्ने र उस्तै स्वस्थ हुने मान्छे पनि नेपालमै ।'
यस्तै उनले आफूहरूले चाहेमा सरकार एक हप्ताभित्रै ढाल्न सक्ने तर आफूहरूको लक्ष्य तत्काल सरकार ढाल्ने नरहेको पनि बताए । उनले भने - 'अहिले पनि यो सरकार ढाल्दिऊँ भन्ने हो भने धेरै त नभनौं एक हप्ताभित्र यो सरकार जान्छ। एमालेले ढाल्दिऊँ भन्ने हो भने। यस्तै यस्तै साँठगाँठ गर्ने हो भने त हामी सात दिनभित्र ढाल्दिन्छौं। '
कार्तिक ३, २०७८ बुधवार १८:५०:२२ बजे : प्रकाशित
एमालेको चियापान : अरु पार्टीलाई आसन, समाजवादीलाई गाली र बहिष्कार
पोखरा - एमाले कास्कीले दसैँ तिहारलगायत सबै चाडवाडलाई लक्षित गरी बुधबार चियापान कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल, पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, पूर्वगृहमन्त्री खगराज अधिकारीलगायत कार्यक्रमको वक्ता थिए ।
एमालेले चियापानमा जिल्लास्थित सबै सक्रिय राजनीतिक पार्टीलाई आमन्त्रण गरेकाे थियो । समाराेहमा सबै राजनीतिक पार्टीलाई आसन ग्रहण गराइयो । सरकारका उपसचिवसमेतको आसन ग्रहण थियो । तर एमालेले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई बहिष्कार गर्‍यो । नेकपा एसको नामसमेत लिएन ।
सुरुदेखि नै वर्गशत्रुका रूपमा समाजवादी पार्टीलाई लिइएको छ । त्यतिमात्रै होइन, कार्यक्रमका वक्ताहरूले नेकपा (एस) को खोइरो खने । एमाले महासचिव पोखरेलले कम्युनिष्ट पार्टी फुटाएर विरोधी पार्टीलाई सत्ता सुम्पिने माधव समूहको गठबन्धन चकनाचुर हुने दाबी गरे । ‘एमालेविरुद्ध जुन गठबन्धन बनेको छ, यो गठबन्धन धेरै दिन टिक्नेवाला छैन । यो चकनाचुर हुनेवाला छ । यो गठबन्धन मुलुकको विकास र समृद्धि रोक्नका लागि हो । मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व धराशायी बनाउन हो,’ उनले थपे, ‘यो अराजकतालाई बढावा दिनका लागि हो । सामाजिक सद्भावलाई खलवल्याउने र विदेशीको इसारामा घुँडा टेक्ने गठबन्धन हो । एमाले यसको विरुद्ध लाग्छ ।’
एमाले सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एकीकृत समाजवादीले कम्युनिष्टको आदर्शविपरीत काम गरेको आरोप लगाए । ‘अहिले एमाले विभाजित गरेर कम्युनिष्ट भन्ने शक्तिहरूले दलाल नोकरशाही पुँजीपतिहरूको संरक्षण गरिरहेका छन् । विदेशीको इसारामा नाच्ने पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाएका छन्,’ उनले भने, ‘यो सरकार दलाल नोकरशाही पुँजीवादीहरूको हो । यसविरुद्ध एमाले लाग्नुपर्ने छ ।’ उनले माओवादी र एकीकृत समाजवादी कुनै पनि हालतमा कम्युनिष्ट हुन नसक्ने बताए ।
पूर्वगृहमन्त्री अधिकारीले एमालेको विभाजन सेटिङबाट गरिएको भन्दै त्यो नस्वीकार्ने बताए । ‘कृत्रिम विभाजन कहिलै स्वीकार्य छैन । सेटिङबाट गरेको विभाजन हामीलाई स्वीकार्य छैन । हामी भुइँबाटै देखाउन चाहन्छौं, ६ गते वडा अधिवेशन र ९ गतेको पालिका अधिवेशनबाट अझ बढी मजबुत बनाएर लाग्छौं,’ उनले भने, ‘यो देशमा नेकपा एमाले जिउँदै छ । हराभराका साथ अगाडि बढ्छ । सम्पूर्ण गलत चिन्तन, शैली प्रवृत्तिलाई चुनौतीका साथ सामना गर्दै संघीयतालाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउँछ ।’न्युज कारखाना
कार्तिक ३, २०७८ बुधवार १८:५६:३५ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद्मा भएको अवरोध हटाउन औपचारिक र अनौपचारिकरूपमा पहल भइरहेको बताउनुभएको छ । सिन्धुपाल्चोकको कुभिण्डेमा दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था लिमिटेडको २९औँ साधारणसभाको उद्घाटनका अवसरमा सभामुख सापकोटाले यही कात्तिक ११ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकअगावै संसद् सञ्चालन गर्न आवश्यक छलफलका लागि पुनः बैठकको आयोजना गरिने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभालाई प्रभावकारी, गतिशील र जनमुखी बनाउने एकमात्र लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले आफू त्यसैमा केन्द्रित भएर काम गर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।
मौसममा आएको परिवर्तनले अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा बाढी पहिराले ठूलो धनजनको क्षति पुगेकामा दुःख व्यक्त गर्दै सभामुख सापकोटाले मुखमै आएको धानबाली नोक्सान भएकामा पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संस्थाका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद नेपालको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा आफू कसैको दबाब र कुनै शक्तिसँग झुकेर राष्ट्र र जनताको हितविपरीत काम नगर्ने प्रतिबद्धता पुनः दोह¥याउनुभयो ।
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–४ कुभिण्डेमा अवस्थित उक्त सहकारी संस्था जिल्लाकै पहिलो हो । वार्षिक पाँच लाख ७५ हजार लिटर दूध उत्पादन हुने र आफ्नै चिस्यान केन्द्रमार्फत दुग्ध विकास संस्थान बालाजुमा पठाइने गरेको अध्यक्ष नेपालले जानकारी दिनुभयो ।रासस
कार्तिक ३, २०७८ बुधवार २०:३६:५५ बजे : प्रकाशित
# अग्निप्रसाद सापकोटा
काठमाडौँ - प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा र अष्ट्रेलियाका राजदूत फेलिसिटी जाने भोल्कबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । उनीहरुबीच बुधबार सैनिक मुख्यालय जङ्गीअड्डामा भेटवार्ता भएको हो ।
उक्त भेटवार्तामा द्विपक्षीय हित तथा पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा विचार विमर्श भएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ । भेटवार्ताले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर तुल्याउन थप सहयोग पुग्ने सेनाको विश्वास रहेको छ ।
कार्तिक ३, २०७८ बुधवार २१:००:५३ बजे : प्रकाशित
# प्रभुराम शर्मा